CD Projekt Red = လောဘ ? – REDPlayer
CD Projekt Red = လောဘ ?
Cyberpunk 2077 ဟာ player တွေကို ငွေကြေးအကုန်အကျများစေမယ်ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကိုပြေပျောက် ငြိမ်သက်စေဖို့ ကြိုးစားနေရင်း Witcher series တွေရဲ့ developer ဖြစ်သူ CD Projekt Red ကတော့ twitter ကနေပါးပါးနပ်နပ်လေး သတင်းထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။
CD Projekt joint-CEO Adam Kicinski က player တွေအတွက် စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ ဖြေကြားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာရှိထားခဲ့တဲ့အတွက်ပေါ့လေ။ သူဖြေသွားတာကတော့ “ ကျွန်တော်တို့ကတော့ Cyberpunk ကိုစီးပွားရေးအရ ပိုထူးခြားအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Online ကတော့မဖြစ်မနေ လိုအပ်နေတဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေရှည်အောင်မြင်ချင်ရင် သွားကိုသွားရမှာပါ”လို့ဖြေထားပါတယ်။
Witcher ရဲ့ ဖန်တီးရှင်ဖြစ်တဲ့ အတွက် Wild Hunt လိုမျိုးပဲ open-world နဲ့ ဇာတ်လမ်းခိုင်တဲ့ single-player RPG ကိုလိုချင်နေတာပါ။ 2013 လောက်ကတည်းက multiplayer ပါလာနိုင်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒီလိုမျိုး multiplayer ဖြစ်လာခဲ့ရင် တစ်ယောက်တည်းသွားရတဲ့ single-player ရဲ့ ခံစားချက်မျိုးကို ထိခိုက်လာနိုင်တာကတော့ single-player RPG player အားလုံးခံစားမိမှာပါ။ ပြီးတော့ microtrasaction ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ ပုံစံတစ်မျိုးမျိုးတဲ့တော့ player တွေဆီက ရသလောက် ငွေထပ်ညှစ်မှာကို ကြောက်လာကြတဲ့ သဘောပေါ့။ Star Wars: Battlefront2နဲ့ loot boxes တွေရဲ့အနေအထားကြောင့် စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ရတာဖြစ် ပြီး CD Projekt Red အနေနဲ့အရင်ကပြောခဲ့ကတာကို ပြန်ပြောဖို့လိုအပ်လာတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လာမယ့် Cyberpunk 2077 ကလည်း wild hunt လိုမျိုး ပေးရတာနဲ့တန်ကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် ပြန်သတိပေးနေတာမျိုးပေါ့။ “တခြားလူတွေလောဘတက်ကြပါစေလို့” ပြောလိုက်တာနဲ့ အကုန်လုံးကောင်းသွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
တကယ်တော့ CDPR( CD Projekt Red) ဟာ player တွေကို အတော်လေးဂရုစိုက်တဲ့ developer ဖြစ်ပြီးတော့ ငွေကိုလောဘဇောတိုက်နေတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုမဟုတ်တဲ့အတွက် gamer အသိုင်းအဝိုင်းမှာတော့ မျက်နှာကောင်းကောင်းရထားတဲ့ သူတွေပါ။ ဒါပေမယ့်ဒီလို ကိစ္စမျိုးကလွယ်ကူတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်ငန်းတွင်းပြသာနာတွေရှိလာပြီးအလုပ် ကြိုးစားပေမယ့်ပေးအပ်တဲ့ဆုလာဘ်ကတော့လုံလောက်မှုမရှိဘူး လို့သူ့အဖွဲ့ထဲက အသံတွေ ထွက်လာခဲ့တာ မျိုးပေါ့။ ဒါနဲ့ CD Projekt Red ကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရတာလည်းရှိထားပါတယ်။ “Game developer အလုပ်ကလူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ပါဘူး” ဆိုတာမျိုးပေါ့။ အခုအချိန်အထိ ကောလဟာလပေါင်းစုံကလွဲရင် Cyberpunk 2077 ထွက်လာမယ့်ရက်ကိုမသိရသေးပါဘူး။ ရေးနေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း The Witcher 3: Wild Hunt ကိုကျွန်တော် ၂ ခါပြန်လောက်ကစားပြီးသွားတယ် Cyberpunk 2077 ကတော့ 2019 မတိုင်ခင်အထိမျော်လို့မရသေးပါဘူးတဲ့။ ကောင်းရော။
Cyberpunk 2077 ဟာ player တှကေို ငှကွေေးအကုနျအကမြားစမေယျဆိုတဲ့ စိုးရိမျမှုတှကေိုပွပြေောကျ ငွိမျသကျစဖေို့ ကွိုးစားနရေငျး Witcher series တှရေဲ့ developer ဖွဈသူ CD Projekt Red ကတော့ twitter ကနပေါးပါးနပျနပျလေး သတငျးထုတျပွနျပေးခဲ့တာတှရေ့ပါတယျ။
CD Projekt joint-CEO Adam Kicinski က player တှအေတှကျ စိုးရိမျစရာကောငျးတဲ့ ဖွကွေားမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တာရှိထားခဲ့တဲ့အတှကျပေါ့လေ။ သူဖွသှေားတာကတော့ “ ကြှနျတျောတို့ကတော့ Cyberpunk ကိုစီးပှားရေးအရ ပိုထူးခွားအောငျလုပျဖို့စိတျဝငျစားနတောဖွဈပါတယျ။ Online ကတော့မဖွဈမနေ လိုအပျနတေဲ့အရာ ဖွဈပါတယျ။ ရရှေညျအောငျမွငျခငျြရငျ သှားကိုသှားရမှာပါ”လို့ဖွထေားပါတယျ။
Witcher ရဲ့ ဖနျတီးရှငျဖွဈတဲ့ အတှကျ Wild Hunt လိုမြိုးပဲ open-world နဲ့ ဇာတျလမျးခိုငျတဲ့ single-player RPG ကိုလိုခငျြနတောပါ။ 2013 လောကျကတညျးက multiplayer ပါလာနိုငျတယျဆိုတာပွောခဲ့ပွီးသားပါ။ ဒီလိုမြိုး multiplayer ဖွဈလာခဲ့ရငျ တဈယောကျတညျးသှားရတဲ့ single-player ရဲ့ ခံစားခကျြမြိုးကို ထိခိုကျလာနိုငျတာကတော့ single-player RPG player အားလုံးခံစားမိမှာပါ။ ပွီးတော့ microtrasaction ပါသညျဖွဈစေ မပါသညျဖွဈစေ ပုံစံတဈမြိုးမြိုးတဲ့တော့ player တှဆေီက ရသလောကျ ငှထေပျညှဈမှာကို ကွောကျလာကွတဲ့ သဘောပေါ့။ Star Wars: Battlefront2နဲ့ loot boxes တှရေဲ့အနအေထားကွောငျ့ စိုးရိမျရတဲ့အနအေထားဖွဈရတာဖွဈ ပွီး CD Projekt Red အနနေဲ့အရငျကပွောခဲ့ကတာကို ပွနျပွောဖို့လိုအပျလာတာဖွဈပါလိမျ့မယျ။ လာမယျ့ Cyberpunk 2077 ကလညျး wild hunt လိုမြိုး ပေးရတာနဲ့တနျကွောငျး အကွိမျကွိမျ ပွနျသတိပေးနတောမြိုးပေါ့။ “တခွားလူတှလေောဘတကျကွပါစလေို့” ပွောလိုကျတာနဲ့ အကုနျလုံးကောငျးသှားမှာတော့ မဟုတျပါဘူး။
တကယျတော့ CDPR( CD Projekt Red) ဟာ player တှကေို အတျောလေးဂရုစိုကျတဲ့ developer ဖွဈပွီးတော့ ငှကေိုလောဘဇောတိုကျနတေဲ့ အဖှဲ့တဈခုမဟုတျတဲ့အတှကျ gamer အသိုငျးအဝိုငျးမှာတော့ မကျြနှာကောငျးကောငျးရထားတဲ့ သူတှပေါ။ ဒါပမေယျ့ဒီလို ကိစ်စမြိုးကလှယျကူတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ လုပျငနျးတှငျးပွသာနာတှရှေိလာပွီးအလုပျ ကွိုးစားပမေယျ့ပေးအပျတဲ့ဆုလာဘျကတော့လုံလောကျမှုမရှိဘူး လို့သူ့အဖှဲ့ထဲက အသံတှေ ထှကျလာခဲ့တာ မြိုးပေါ့။ ဒါနဲ့ CD Projekt Red ကကွညောခကျြတဈစောငျထုတျပွနျခဲ့ရတာလညျးရှိထားပါတယျ။ “Game developer အလုပျကလူတိုငျးအတှကျ မဟုတျပါဘူး” ဆိုတာမြိုးပေါ့။ အခုအခြိနျအထိ ကောလဟာလပေါငျးစုံကလှဲရငျ Cyberpunk 2077 ထှကျလာမယျ့ရကျကိုမသိရသေးပါဘူး။ ရေးနတောနှဈပေါငျးမြားစှာကွာနပွေီဖွဈပမေယျ့လညျး The Witcher 3: Wild Hunt ကိုကြှနျတျော ၂ ခါပွနျလောကျကစားပွီးသှားတယျ Cyberpunk 2077 ကတော့ 2019 မတိုငျခငျအထိမြျောလို့မရသေးပါဘူးတဲ့။ ကောငျးရော။
Tags microtransition single-player
Titan Quest : Ragnarok
Minecraft ရဲ့ Graphic Update